पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकमा नै देखियो कोरोना ! – Namaste Dainik
July 27, 2020 July 27, 2020 NamastedainikLeaveaComment on पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकमा नै देखियो कोरोना !
पोखरा- मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एक डाक्टरमा सोमबार कोरोना पु’ष्टि भएको छ । मनिपाल कलेजमा एमडी पहिलो वर्षमा उनी मेडिकल वार्डमा कार्यरत चिकित्सक हुन् । सामान्य ज्वरो आएकाले स्वा’ब लिएर परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
क्षेत्रीय अस्पतालको कोरोना प्रयोगशालामाा परीक्षणका गर्दा उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो । ती स्वास्थ्यकर्मी रिपोर्ट नआउँदासम्मै बिरामी परीक्षण गरिरहेको मनिपाल उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । उच्च सतर्कताका बीच काम गरिरहेका उनको शरीरमा भाइरस कहिले प्रवेश गर्‍यो भन्नेमा अस्पताल प्रशासनले खोजी सुरु गरेको छ ।
उनी कति दिनदेखि संक्रमित थिए र कति बिरामी परीक्षण गरे भन्ने अन्योल कायमै छ । उनलाई अहिले क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याइएको छ । मनिपालको आवास र मेडिकल वार्डलाई स्यानिटाइज गर्ने र ती चिकित्सकको सम्पर्कमा आएकालाई निगरानीमा राख्ने प्रयास भैरहेको अस्पताल प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भोलिको बैठक बाटै ओलीलाई हटाउने निश्कर्ष !सक्लान कि नस्क्लान आफ्नो मत राख्नुहोला।